Tena Ratsy Ny Fahalotoan’ny Rivotra Ao Kathmandu , Mila Sarontava Na Dia Ireo Andriamanitra Aza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Marsa 2017 5:41 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Swahili, বাংলা, Ελληνικά, 日本語, русский, polski, Italiano, English
Vehivavy zokiolona Tibetana mivavaka sady manao sarontava mba hiarovana amin'ny vovoka , Mônastera Tharlam, Boudha, Kathmandu, Nepal. Sary tao amin'ny Flickr avy amin'ny Wonderlane. CC BY-NC 2.0
Miatrika ny fandotoan-drivotra ratsy indrindra tao anatin'ny tantarany ny renivohitr'i Nepal Kathmandu . Miaraka amin'ny poti-bovoka na aiza na aiza, nirongatra ny aretin'ny fitaovam-pisefoana, ary tsy miraharaha tanteraka ny zava-misy ny governemanta, nanapa-kevitra ny hanao hetsi-panoherana tamin'ny alalan'ny fametrahana sarontava teo amin'ny sarivongana malaza manerana ny tanàna ny vondrona mpianatra.
Nampanaovin'ireo tanora sarontava ihany ny sarivongana ny farany mba hanehoana an'ohatra ny hetsi-panoherana manohitra ny fahalotoan'ny rivotra ao Kathmandu Nepal
Nanatevin-daharana tamin'ny alalan'ny fanaovana sioka tamin'ny tenirohy ampiaraka ny ‘Kathmandu’ sy ‘vovoka'; ary ‘sarontava’ sy ‘Kathmandu’ ireo mponina. Nitondra sarontava avokoa na dia ireo andriamanitra tao amin'ny fampisehoana nokarakarain'i Baha sy Bahi tao Nepal aza, izay mônasitera bodista fanta-daza.
Na dia ny andriamanitra aza dia mila sarontava eto!
Nozaraina betsaka ny sarin'ny sarivongan'ny praiminisitra malaza Nepal teo aloha Juddha Shamsher manao sarontava .
Manohitra ny fanimbana ny fananam-bahoaka aho, fa mba hanosehana ny governemanta mikasika an'i vovokamandu izy ity.
Mihoatra noho ny kely indrindra azo ekena amin'ny haavon'ny OMS ny haavon'ny fandotoana ao Kathmandu. Nanampy ny fandotoana izay efa hateraky ny fahandroana biriky an-jatony manodidina ny tanàna sy ireo fiara izay manentsina ny lalana ao Kathmandu ny asa fanarenana taorian'ny horohorontany tamin'ny taona 2015, ny tetikasa fanalebeazana ny làlana sy ny asan'ny fantsona lehibe mifandray amin'ilay Tetikasa Famatsian-drano Melamchi (MWSP) izay andrasana fatratra .
Manakana ny rivotra ihany koa ny Lohasahan'i Kathmandu izay miendrika koveta ary manampy ny loto ho voafandrika ao anatin'ny rivotra iainana, ka vao maika mahatonga ny fahalotoan'ny rivotra ho mora kokoa mandritra ny ririnina, araka ny Tambajotra Fanadiovan-drivotra ao Nepal .
Nanazava ny manampahefana tao amin'ny Vaomieran'ny Fikarohana momba ny Fahasalamana ao Nepal fa misy potipoti-javatra madinika latsaky ny 2,5 mikrometatra ny rivotra ao Kathmandu, izay fantatra ho mahatonga ny homamiadana. Kely tokoa ireo potipoti-javatra latsaka na mitovy amin'ny 10 mikrometatra ny savaivony, izay kely noho ny singam-bolon'olombelona ny sakany, ka mora foana ny hidirany any anaty havokavoka, ary mety hiteraka olana ara-pahasalamana goavana.
Tondro Fandotoan-drivotra ao amin'ny Lohasaha.
Nampiseho ny #Vovokamandu ny lahatsoratra tao amin'ny Instagram .
#Vovokamandu ! #Ringroad làlana ao #Gausala, feno #vovoka ! #melamchi #kathmandu #Nepal
Sary nozarain'i KinG Ashoka (@ashokpillar) 30 Des 2016 tamin'ny 5:42 ora hariva PST
Nizara ity sariitatra ity i Upendra Shrestha:
Ny zava-misy ao #vovokamandu Kathmandu
Milona amin'ny famaliana ny krizin'ny fandotoana ankehitriny ny governemanta raha tokony efa nandray fepetra mba tsy hahatonga ity vovoka tafio-drivotra tonga lafatra ity.
Nandrara ireo fiara fitateram-bahoaka feno 20 taona tao an-drenivohitra sy ny manodidina ny lohasaha ny governemanta vao haingana. Nanome toromarika ny manampahefana misahana ny rano ihany koa ny Komity Miaro ny Tontolo Iainana ao amin'ny Parlemanta mba hitifitra rano hampihenana ny fandotoan'ny vovoka; ary efa nampiasa teknolojia vaovao ny fahandroana biriky miisa folo izay tokony hitondra fampihenana ny fandotoana hatramin'ny 60%, araka ny tatitry ny BBC .
Na izany aza, amin'izao fotoana izao, tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mametraka sarontava amin'ny tarehiny ireo mponina ao Kathmandu, toy ireo sarivongana malaza ao an-tanàndehibe.